imikhuba Umthengi, ezithinta umbono ingaphakathi ezikhangayo
ukhona lapha: Ikhaya amathiphu imikhuba Umthengi, ezithinta umbono ingaphakathi ezikhangayo
Le ndawo eziphilayo yakhelwe ukuhlala abantu, Ngakho-ke, ukuze kube lula zethu, sinikeza afanele e ekuphileni kwansuku zonke izinto. Uyini umphumela lezi zinto isitayela jikelele egumbini, futhi yini amaphutha ukugwema ukulondolozwa kangcono Igumbi ukubukeka ekhangayo futhi uzilungise?
Ikhishi yokugeza izitsha yokuwasha
Ngaphandle izimali yasekhaya ungenzi noma yimuphi umnikazi eyodwa futhi, Yiqiniso, kufanele kutholakale kalula bona. Ukuze isitoreji yobuhle ungakwazi uthele ketshezi okugeza imikhiqizo emaphaketheni izigubhu ezithakazelisayo futhi ekhangayo futhi dispensers, nokuvumelanisa nge ingaphakathi ezivamile. isayithi www.inmyroom.ru ungathola design izixazululo ezithakazelisayo ekhishini ifenisha, Excellent ithuluzi isitoreji inketho ebezingakhiwa ohlelweni ugeze nge umklamo ezifihliwe.
Omama abaningi abasemakhaya ukungatholi ukususa le-accessory Ukugunda, futhi ulisebenzise njengoba indawo isitoreji esengeziwe. Kubukeka umbukwane awful, ngakho ekhoneni ngoba ayina is best enikeziwe egumbini sigqoka, enezela ngayo i-TV noma umculo nemishini, ukuthi unesizungu ngesikhatsi operation.
izicathulo gqwa ephasishi
Lokhu kuyinkinga yangempela imikhaya yasekhaya eminingi, futhi kwenzeka ngoba, ukuthi lelo hholo alinikezi isamba elanele isikhala izicathulo yabo bonke amalungu omndeni, ikakhulukazi ngenkathi off. Yingakho lapho besanda design noma kukhethwa ifenisha kufanele sinake lokhu ehilelekile, ukuhlomisa ihholo futhi banquettes ivulekile obuvnitsami obusebenzayo.
Zendiza kanye nemishini
Ukuvivinya bike, ithrekhi ezemidlalo, dumbbells, sisebenzisa izikhathi eziningana ngesonto, thatha imali eyanele isikhala, Ngakho-ke, ezindlini ezincane ukubeka mini-ikamelo lakho ngempela kulingane. kahle, futhi uma ngeke benze ngaphandle kwalo, ke kungcono kocingo off indawo kwesikrini ezemidlalo.
Indawo enkulu ukugcina la magajethi kungaba ibhodi kazibuthe, okuyinto ibekwe esikhaleni. Enye indlela ukubhekana nale yokusilela kungenzeka yokudweba udonga noma ingxenye upende okhethekile, lapho can kube odonsa fixed.
eziyizikhumbuzo, amazwe ezivela emazweni ahlukahlukene
Ukuhlela isitoreji lezi gizmos lovely kufanele ukuthenga kubo sinye. Leli qoqo hhayi kuphela kukukhumbuza izikhathi ezimnandi, labetibambile eholidini, kodwa futhi ukuhlobisa igumbi.
Amathawula egumbini lokugezela imibala ehlukahlukene
Multi-anemibala amathawula - into, ezenzeka cishe kuwo wonke umkhaya, kodwa inala izindawo ezinemibala kuletha isiphithiphithi ukudideka elingaphakathi yokugezela. Abaklami belulekwa ukuthola ezinombala ofanayo amakhophi, kodwa ukuze, ukuhlukanisa, amazwi okungokwakho onikezwe, bona thunga ilebula enegama noma luhlavu lolusekucaleni igama.
Umthetho obaluleke kakhulu mayelana ukongiwa efulethini iyona systematization lwezinto ezincane. Manje ungathola ezihlukahlukene izitsha kanye iziqukathi le njongo, kungani izinto, ukuthi imfuhlumfuhlu kungcono ukususa emehlweni prying.